महिला र पुरुष एकरातमा कति पटकसम्म सेक्स गर्न सक्छन् ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
असार ३ गते, २०७५ - ०९:३२
असार ३ गते, २०७५ - ०९:३२ मा प्रकाशित
दम्पतीबीच जति धेरै उमेर अन्तर हुन्छ, उत्तिनै सम्बन्ध विच्छेद हुने संभावना बढ्छ ।
पाँच वर्षको हुँदा १५ वर्षे किशोरको जस्तो यौन इच्छा
योनीका आकार थरिथरिकाः यसले यौनसन्तुष्टिमा के फरक पर्छ ?
यसरी हुन्छन् सफल मानिस–सफल व्यक्तिका केही कुरा
यस कारण महिला ४० कटेपछि अफेयर राख्न चाहन्छन्
सेक्ससम्बन्धी रोचक जानकारी ?
उमेर बढ्दै गएपछि ‘सिंगल’ रहने चाहाना पनि बढ्छः एक अध्ययन
नेपाली बजारमा चिनियाँ र रुसी यौनकर्मी सक्रिय
के तपाइलाई थाहा छ ? मदिराले स्वास्थ्यलाई कसरी ध्वस्त बनाउँछ,
के तपाईंमा पनि निद्रामा हिँड्ने समस्या छ ?